Ku soo dhoweynta bilawga wadahadaladda ganacsiga ee u dhexeeya Yurub iyo Maraykanka - TELES RELAY
ACCUEIL » International »Si deg deg ah u bilaabista wada xaajoodka ganacsiga ee u dhexeeya Yurub iyo Maraykanka
Ku dhowaad bilawga wadahadaladda ganacsiga ee u dhexeeya Yurub iyo Maraykanka
Brussels ayaa loo oggolaaday inuu galo wadahadal lala galo Washington, oo ka wakiil ah wadamada xubnaha ka ah. Laakiin Faransiiska ayaa soo bandhigay ballan-qaadkeeda cimilada ah si uu uga codeeyo.
By Sophie Petitjean Ku qor maanta 10h25
Wakiilka Yurub ee Cecilia Malmström ee Brussels, 18 January. EMMANUEL DUNAND / AFP
Midawga Yurub wuxuu diyaar u yahay in uu furo heshiis ganacsi oo xadidan oo lala galo Mareykanka. Mas'uuliyiin isweydaarsi ah oo kaliya ayaa la gaaray, Guddoomiyaha Ganacsiga Cecilia Malmström, ayaa ku dhawaaqay Isniintii, 15 Abriil, oo ujeedadeedu tahay in la dhammeeyo heshiis "Win-win" halkan ilaa 1er November. Rajo-xumo ay ka dhexmuuqday mucaaradka Faransiiska iyo farqiga faragelinta u dhexeeya labada garab ee u dhaxeeya.
Inkasta oo Washington ay qorsheyneyso in ay wadaxaajood la gasho heshiis ballaaran, Brussels waxay rabtaa in ay ku koobnaadaan laba qaybood, oo ah tirtiridda canshuuraha alaabta warshadaha (oo aan ku jirin alaabada beeraha) iyo qodobbo cusub oo ku saabsan qiimaynta u hoggaansamida si loo fududeeyo ansixinta alaabta.
Qodobka loo qoondeeyey macaamiisheena Sidoo kale akhri Ganacsiga: Yurubta waxay u kala qaybsantay cadaadis
Maraykanku waxay diyaar u ahaayeen in ay wada xaajoodaan tan iyo bartamihii bishii February, laakiin dhinaca Yurub waxay qaadatay waqti dheer. Faransiiska, oo ka cabsanaysa feejignaanta "TTIP bis" (ganacsiga transatlantic iyo iskaashiga maalgashiga), waxay doorbidi laheyd inay sugaan illaa maalinta ka dambaysa doorashooyinka Yurub ee May 26.
Si kastaba ha ahaatee, dalalka xubnaha ka ah, gaar ahaan waxay ka walwalsan yihiin Donald Trump oo raadin doonta xilliga labaad ee dayrta 2020, wuxuu doonayaa inuu degdeg u noqdo - Kiraystaha Aqalka Cad inuu go'aansado, bartamaha bisha May, haddii uu soo celiyo cashuuraha dheeraadka ah ee dheeraadka ah ee gawaarida yurub. Gaar ahaan tan iyo intii wadahadalku sii wadi doono ilaalinta tan iyo ajandaha wanaagsan ee labada dhinacba ay ka go'an tahay xagaaga 2018 si cad u mamnuucaya iyaga inay soo rogaan canshuur cusub marka ay wada xaajoodaan.
Si ka duwan nuqulkii ugu horreeyay ee la daabacay Janaayo, dardaaranka gorgortanka ah ee la kiciyey ayaa ka mid noqonaya taxadar taxane ah si wax looga qabto dareenka Faransiiska. Sidaa daraadeed, dukumeentiyada, oo ku saabsan qiyaas ahaan shan iyo toban bog, guud ahaan cadee in TTIP yahay "Dhammaan" iyo waa "Ku haboon". Waxay ku boorinayaan Mareykanka in ay cashuurteeda ku soo celiyaan birta iyo aluminium, oo aysan ku soo rogin kuwa cusub.
Waxaa intaa dheer, waxay xaqiijinayaan in badeecooyinka beeraha laga saaro wadahadalka, halka kalluumeysiga lagu darayo qaybta xasaasiga ah (taas oo ah, dhammaadka, waxay keeni kartaa in laga saaro alaabooyin gaar ah). Ugu dambeyntii, Komishanka Yurub wuxuu balanqaaday inuu sameyn doono daraasad saameyn deg deg ah oo ku saabsan horumar waara, si loo xaqiijiyo in Maraykanku uusan ka faa'iideysan faa'iidada tartanka ka soo bixitaanka heshiiska Paris ee cimilada ee 2015.
Qodobka loo qoondeeyey macaamiisheena Sidoo kale akhri Ganacsiga: Komishanka Yurub wuxuu doonayaa in uu waqti ku badbaadiyo Maraykanka
Dammaanadahan oo dhan maahan mid ku filan. Codbixinta safiirada todobaadkii hore, kadib kulan wasaaradeed ayaa Isniintii, Faransiiska si cad u muujiyay mucaaradkoodii iyo Belgium waxay ka aamuseen, heshiis aan ka jirin gudaha. Emmanuel Macron ayaa Twitter-ka ku sharraxay " Faransiiska [Ka soo horjeeda] bilawga wadahadal ganacsi oo lala galo Mareykanka, kaas oo la dhigo meel ka baxsan heshiiska Paris ».
Paris waxay ahayd mid si fiican uga warqabtay xilligii codka ee mucaaradkeed aysan ka horjoogsanaynin waraaqaha lagu meelmarinayo.
Hosuk Lee-Makiyama, oo ah Agaasimaha Xarunta Dhaqaalaha ee Caalamiga ah ee Siyaasadda Dhaqaalaha (Ecipe), Sababta uu ufilan la'aanta ah, waa mid aad u yar oo ku saabsan arrimaha ganacsiga, waa in la eego meelo kale: Faransiiska mar hore ayaa loo arkay in ay ka soo horjeedaan waxyaallaha ay doonayaan in ay helaan wax badan. Xaaladdan, fekerka ma aha wax aad u badan in la helo, laakiin si wax looga qabto xaqiiqda ah in Emmanuel Macron uu leeyahay rating heer aad u hooseeya, " Waxa uu sheegay. Iyo in ay ku adkeystaan ​​in Paris uu si fiican u ogyahay, waqtiga codka, in mucaaradku aysan ka horjoogsan doonin in la ansixiyo.
Haddii wada-hawlgalayaasha yurubiyaanka ah ay sameeyeen go'aanka ah in ay hore ugu sii gudbaan amarka kala-firdhinta, ayaa ugu adag in la sameeyo. Sida lagu aqoonsado Mme Malmström, " Congresska Mareykanka wuxuu leeyahay qaab ganacsi oo ka duwan kuwa Yurubiyaanka ah », iyagoo ku baaqaya in lagu daro beeraha. Dhinaca Yurub, habka ansixinta sidoo kale jiri doona adag: heshiiska meelgaarka ah, hal mar wada xaajooday, waxay u baahan yihiin taageero ka 55% ka mid ah dalalka xubnaha ka ah (oo wakiil ka 65% dadweynaha) iyo aqlabiyad buuxda ah Xubnahan. Tani lama helin markii aan ognahay Baarlamaanka hadda, oo dib loo cusbooneysiin doono ka dib markii la dhameeyay doorashooyinkii dhammaadkii bishii May, ay ku fashilmeen bishii Maarso in ay ku heshiiyaan xalinta wadajir ah.
Sophie Petitjean (Brussels, xafiiska Yurub)
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/04/16/lancement-imminent-des-negociations-commerciales-entre-l-europe-et-les-etats-unis_5450841_3234.html?xtmc=etats_unis&xtcr=1
Switzerland: Wariye ka shaqeeya Raadiyaha Iswiidhen Raadiyaha Iswiidhen - Wararka Af-soomaaliga |
Miyuu macquul yahay? Kaniisad ayaa gubatay buugaagta Harry Potter, maxaa yeelay waxay ka soo horjeedaan ereyga Ilaah
Farriinta BlackBerry waxay xidhantahay weligaa